“यस्ता ल’क्षण देखिए पनि को’रोना हुनसक्छ! विद्यालय बन्द गरेर भए पनि बालबालिका ब’चाऊ: डा पाण्डे:: Mero Desh
“यस्ता ल’क्षण देखिए पनि को’रोना हुनसक्छ! विद्यालय बन्द गरेर भए पनि बालबालिका ब’चाऊ: डा पाण्डे
Published on: १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०१:३९
काठमाडौ । नलागुन्जेल कोभिड केही होइन, लागेपछि ब र्बा द हो। आईसीयू बाट फर्केका व्यक्ति लाई थाहा हुन्छ, कोभिड के हो ? जनस्वास्थ्यका मा”पदण्डमा क’डाइ का साथ अनुगमन, निगरानी तथा जरिवाना नगर्ने देश नेपाल मात्र हो। कोरोनाको दोस्रो लहरको अवस्था यस्तो छ।”गत साल फैलिएको म’हा’मा’रीभन्दा अहिलेको फरक छ।
“लक्षण विहीन धेरै छन् भने लक्षण देखिए का ग ‘म्भी र भएर अस्पताल भर्ना भएका छन्। बेलायतको नयाँ प्रजा तिले बालबालिका तथा युवालाई तुलनात्मक रूपमा धेरै असर गरेको छ। बेलायतको प्रजाति गत सालको कोरोना भाइरसभन्दा ७० प्रतिशत धेरै सं/क्रा/म/क छ। दी’र्घरो’ग नभएका व्यक्ति पनि गम्भीर भएर अस्पतालमा छन्।”
“गत साल देखिएका कोभिडका लक्षण यसपटक फरक छन्। यसपटक ज्वरो, खोकी नभए पनि पखाला, बान्ता, थकान, बिमिरा आदि लक्षण मात्र भएका व्यक्तिमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। कुनै लक्षण देखियो भने वा सं’क्र’ मितसँग भेटभएको अवस्था भए परीक्षण गर्न ढिला नगरौं।
“केही बालबालिकालाई लक्षण नदेखिएर एक्कासि निमो निया देखिएको र जाँच गर्दा कोभिड पुष्टि भएको छ।केही सं’क्र’मितलाई पटकपटक पीसीआर नेगेटिभ देखिए पनि कोभिड निमोनिया भएर फोक्सो ड्या मे ज भएको उपचार रत चि”कित्सकले बताएका छन्। हरेक अस्पतालमा सं’क्र मित को चाप बढेको छ।”
“भारतसँग धेरै देशको हवाई सम्पर्क बन्द छ।दैनिक हजारौं “भारतीय नेपाल आएर अरबलगायत का देशमा जाँदै छन्। भारत बाट नेपाल आउने स”बैलाई अनुगमन, निगरानी र परीक्षणमा चुक्नु हुँदैन।सीमा ना’कामा व्यापक कडाइ,साथ परीक्षण, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको पूर्ण तयारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।”
“सं क्र म ण थोरै भएका बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभाव कारी हुन्छ। अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ निकै फितलो छ। मापदण्ड पालनाका लागि सरकार कडा नहुने हो भने यो पटकको पनि लहरले ठूलो क्षति गर्ने स”म्भावना छ। र अब जनस्वास्थ्य का मा’पद’ण्डमा क’डाइ, अनुगमन, निगरानी तथा जरिवाना नगर्ने देश नेपाल मात्र हो।
“सं क्र म ण फैलिएपछि दुःख पाउनुभन्दा सं क्र म ण रोक थामका लागि सरकार र नागरिक अत्यन्तै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। गत साल गरेका गल्ती दोहोर्‍याउनु भएन।”हामी आम नागरिक अत्यन्तै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। हाम्रै लापर “बाहीले सं क्र म ण सर्ने हो।सं”क्रमित भएर भौ”तिक तथा आर्थिक मानसिकलगायत असर भोग्नुपर्ने हामीले नै हो।
तसर्थ हामी अत्यन्तै जिम्मेवार भएर अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिनेगरी डबल मास्क लगाऔं। मान्छेबाट मान्छे मा सर्ने भएकाले मान्छेसँग दूरी कायम गर्न नचुकौं।जोखिम अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेर भए पनि बालबालिकालाई बचाउनुपर्दछ”।
बरु एक वर्ष पढाइ ढिला भए केही असर होला तर जीवन अमूल्य छ। अनलाइन पढाइको विकल्प छैन। विद्यालय बाट सं क्र म ण घरघरमा पुग्यो भने अकल्पनीय अवस्था हुन सक्छ। धेरै दौडधुप गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा सम्भव भएसम्म घरमा बस्ने बानी गरौं। कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाऔं।”
“सरकारले जारी गरेका सूचना तथा निर्देशन पालना गरौं। “आधिकारिक संस्था वा वि’ज्ञको मात्र कुरा सुनौं। भ्र”मको पछाडि नलागौं।भ्रम सबैभन्दा घा’त’क महा’मा’री हो। पाए सम्म कोरोनाको खोप लगाएर सुरक्षित बनौं। यसका अति रिक्त इ’न्फ्लुएन्जा र निमोनियाको खोप पनि लगाऔं।”
“पौष्टिक खाना, व्यायाम, निद्रा, स”कारात्मक “सोंच तथा प्रकृतिको उपभोग नै सबैभन्दा ठूलो इम्युन बुस्टर हुन्। र नलागुन्जेल कोभिड केही होइन, लागेपछि ब र्बाद हो। आ’ईसीयूबाट फर्केका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, कोभिड के हो ? देश लकडाउनको बाटोमा जानु हुँदैन। लकडाउनमा नजानका लागि।
जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेरगराउने प्रमुख उपाय हो। यो पटक एकदम सिरियस बनौं। डर त्रा स, अत्यास मानेर हैन, योजनापूर्वक सतर्क बनौं। सबैले प्रण गरौं म सं’क्रमित हुनेछैन,मेरो परिवार र समाजलाई मैले बचाउनेछु।डाक्टर रविन्द्र पाण्डे”को यो “सल्लाह सुझाव कस्तो लाग्यो” हेरेर शेयर गर्नुस्।